NamasteNEPALI.com: एनआरएन जापानमा भाँडभैलो
एनआरएन जापानमा भाँडभैलो
भगवानका भक्तहरु छालाको जुत्ता लगाएर मन्दिरमा नांगो नाँच किन ?
बासुदेव लामिछाने । आदारणीय एनआरएनका हस्तीहरु, कार्यसमिति भित्रबसी अहोरात्र खटिनुहुने पदाधिकारीहरु, नाम रोसन गर्नुहुने क्षेत्रिय संयोजक, कमिटि र साथिहरू सबैमा नमस्कार । म एनआरएनसँग सम्बन्धित भएकाले यो पत्र लेख्दै सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सवाल नम्वर एक एनआरएनका केन्द्रीय अध्यक्ष शेष घले ज्यु आएर भवन निर्माणका लागि भनेर बिद्यार्थीहरुसँग उठाएको सबै पैसा विद्यार्थीहरुलाई कहिले फिर्ता दिन्छन् ?
सवाल नम्वर दुई आज भन्दा करीब २ हप्ता अगाडि एनआरएन जापानले मिडिया र सामजिक सन्जाल मार्फत आफ्नो अघिल्लो निर्णय सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थी लाई प्रारम्भिक र साधारण सदस्य भनेर २ बर्ष पुगेको र नपुगेको गरि पारेको भ्रम त्यही मिडिया वा सामजिक सन्जाल बाट सम्बन्धित पक्षबाट माफी कहिले र कस्ले माग्ने तयारि कता बाट हुँदै छ ?
सवाल नम्वर तीन अहिले विद्याथीलाई एनआरएनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय निकाल्नु हुने सबै जना कस्को भोट ले त्यहाँ पुग्नु भाको हो, त्यो बिर्सनु भएको हो ? जसको भोटले नेतृत्वमा पुग्यो उसैलाई गलहत्याउने प्रवृत्तिको विकासले भोलि कस्तो नैतिकता सिक्ने ?
सवाल नम्वर चार एनआरएन जापानको सदस्य बन्नकालागि भन्दै फर्म खोलीयो र म आफैंले पनि ७३० जनाको फर्म भराएँ । सदस्यता लिन चाहनेहरुसँग एक हजार सहित सम्पुर्ण विवरण ल्याउन भनियो । मैले जस्तै अन्य क्षेत्रका साथिहरुले पनि गर्नुभयोहोला । आखिर मलाई र म जस्ता इमान्दार एनआरएन कार्यकर्ताहरुलाई पंगु बनाउने काम भयो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कस्ले दिने ?
सवाल नम्वर पाँच, अहिले जापान को केन्द्रीय कमिटिमा लगभग सबै गैर(विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ भन्दैमा विद्यार्थीको खिलाफमा एकै चोटि यस्तो निर्णय गर्दा नेपालमा संविधानको मस्यौदामा जनताले सुझाव दिएजस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने, यसको जिम्मेवारी लिने को ?
सवाल नम्वर छ, हिजोको दिनमा शरणर्थीलाई मर्नेगरि गाली गरेर नथाकेकाहरु अस्ती तोचिगी र गुन्बाकेन तिर कार्यक्रम बनाएर जानु भाको थियो रे , कि शरणार्थीहरुले भोट हाल्न पाउने विधान आउंदै छ र हो ?
सवाल नम्वर सात, फुकुओकमा अस्ती सर्बसम्मतले अध्यक्ष लगायत सवैपदको निर्वाचन अगाबवै सहमती गरिएको छ । जस्मा अध्यक्ष लगायतका धेरै विद्यार्थी छन । यसलाइ अब के भन्नुहुन्छ ?
सवाल नम्वर आठ एनआरएनमा देखिएको गोलमटोलकै कारण क्युशु, ओकिनवा , ओसाका लगायतका क्षेत्रहरुमा निर्वाचन नहुने पक्क-पक्की छ । हामि केन्द्रीय निर्वाचन सफल र समयमै भएको हेर्न चाहन्छौं । कुनै सरल बाटो खोज्न सकिन्न ?
सवाल नम्वर नौ, क्षेत्रीय निर्वाचन पहिले हो कि केन्द्रीय निर्वाचन ? माहोल हेर्दा पत्तै पाउन गाह्रो भो । सबै चुनावमा उठ्नेहरु भन्नु हुन्छ विद्यार्थीको लागि मैले लडिरहेकोछु, यदी त्यसो हो भने के तपार्इं चुनाव बहिस्कर गर्न सक्नुहुन्छ ? यसको उत्तर तपाईंसँग नभए पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहाछ ।
सवाल नम्वर दश, अनलाईन फमको मिति भोली सकिन्छ, अहिले सम्म एक हजार सदस्य पनि पुगेको छैन अहमतालाई छाडेर यो महिनाको अन्तिम सम्म समय थप्नुस, सबैकालागि राम्रै हुन्छ । अरुको त कुरै छोडौं यसपालीको चुनावमा उठ्नु भएका केहि अग्रज जो स्वयं नै अनबिज्ञ हुनुहुदो रैछ ।
११- नयाँ नयाँ सिटीहरुमा धमाधम समितिहरु विस्तार गरिएका हल्ला चलेका छन् । चुनाबको मुखमा गरिएको यो बिस्तार ले गलत सन्देश गाको छ जनमानसमा भन्ने कुरा बसझी बुझी बुझ नपचाइदिने कि ? एनआरएनलार्इ अस्ति सम्म यो हाम्रो मन्दिर हो भन्ने अनि आज जुत्ता चप्पल लगाएर छिर्ने, त्यो पनि छालाको ?
सिसिटिभि क्यामरा लगाएर भएपनि निर्वाचन गराउने दावी गरेको निर्वाचन समितिलाई मेरो सुझाब र अनुरोध यस प्रकार रहेको छ । उम्मेदवार मध्यबाटै तत्कालीन आचार संहिता विपरीत आन्तरिक षड्यन्त्र भैरहेको गन्ध आयकाले, यसैलाइ आधार बनाएर निर्वाचन गर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा उजुरी पर्ने र सांचो ठहरिने लगभग पक्का पक्की छ । त्यसैले दबाब रहित निश्पक्ष र न्यायिक छानबीन गर्न तयारी गर्नुहोला ।
कस्तो अचम्म विद्यार्थीले चाहिँ भाग लिन नपाउने अनि विद्यार्थीकै डिपेण्डेनमा भर्खरै जापान आएकाहरुले चाँहि भाग लिन पाउने ? धेरैजसो यसपटकको चुनाबमा भिड्नु हुने सबै रेस्टुरेन्ट ब्यावसायी हुनुहुन्छ ।
अब विद्यार्थी भएपो फकाइ-फुलाइ भोट हाल्नलाई ट्रेन भाडा दिएर बोलाउने , सबै कूक, कि त जगिरे वा बिजनेस म्यान, त्यसैले रेस्टुरेन्ट या कम्पनी नै बन्द गर्न पर्ने भो भनेर कता-कता पोस्टल भोटिङको गन्ध आइरको छ ।
सिस्टम बसाल्नु गलत होइन तर आफ्नो मात्रै दुनो सोझाउन अब त छोड्ने कि ? आइसिसिको आदेश भनेर यस्लाइ नटार्नु होला, झन भुल हुनेछ किनकि आइसिसीको अध्यक्ष,उपाध्य़क्ष र एसिया प्यासिफिकका उप संयोजक, जापानको तर्फबाट ३ जना सदस्यले प्रस्ट पहिले नै भन्नु भाको छ कि नेपाल सरकारले दर्ता गर्दा नमानेकोले मात्र विद्यार्थीलाई समाविष्ट नगरेको हो तर हामी त सबै हाम्रो हिसाब ले चल्न चलाउन सकिन्छ ।
त्यो त एउटा प्रक्रिया मात्र पुरा गर्न त्यसो गरिएको हो । सबै पहिले जस्तै हुन्छ भनेर गर्नुभएका भाषणका रेकर्ड खोजे अझै भेटिने हुँदा विद्यार्थीहरुलाइ बलिको बोका बनाउने काम त अलि राम्रो भएन होलानी ?
जापान आयको धेरै भाको त छैन तर जुन दिनबाट पाइला टेकियो सोही दिन बाटै एनआरएनको मुभमेन्टमा हिडिरहेको छु । आफु हिजोको दिनमा विद्यार्थी भएरै हिडेकोले आज विद्यार्थीमा पर्न जाने मर्का नजिक बाट नियाल्ने मौका पाएको हुँदा, यि कुराहरुले विद्यार्थीहरुको मनको कुनै कुना अशान्त बनाइराखेको छ ।
बिचार गरिदिनु भयो भने तपार्इं एनआरएनका नेताहरु सबैको जय हुनेछ र मोचिरोन एनआरएनको पनि । गल्ती लेखेको भए माफी चाहन्छु ।
( लेखक एनआरएन जापान क्युश्यु कमिटिका सचिव हुन् । )